प्रशासनको हेलचेक्राइ विरूद्ध घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयले ‘शिक्षा सडकमा अभियान’ थाल्ने – सिक्किम जर्नल
दार्जीलिङ, 27 अप्रेल। घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयलाई सरकारीकरण गरिनुपर्ने अथवा जीटीएको कुनै पनि व्यवस्थामा अन्तर्भुक्त गरिनु पर्ने माग गरिॅंदै आएको भए तापनि अहिलेसम्म यस मागलाई पूरा गरिएको छैन। यस कारण आउँदो 29 अप्रेलदेखि घुम जोरबङ्गलो कलेजमा पेनडाउन गरिने र6मईदेखि भोक हडताल शुरु गरिने भएको छ।
घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको कलेज स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशनका अध्यक्ष डा. महेश दाहालले जनाएअनुसार घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयलाई सरकारीकरण गरिनु पर्ने माग गरिएको थियो। त्यसो नभएसम्म गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको कुनै पनि व्यवस्थापनअन्तर्गत अन्तर्भुक्त गरियोस् भनेर पनि माग गरिएको थियो। यद्यपि, आजसम्म प्रशासनले महाविद्यालयको मागप्रति बहिरो भएर बसेको छ। आगामी दिनहरूमा महाविद्यालयको अस्तित्व हराएर जान सक्दैन भन्न सकिँन्दैन। यी विषयहरूलाई केन्द्रगरी आगामी 29 अप्रेलदेखि पेनडाउन हडतालको घोषणा गरिएको हो। उनले6मईसम्म पनि महाविद्यालयका मागहरू पूर्ण नभए भोक हडताल शुरु गरिने बताए। उनले उक्त मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिने अनुरोध गरे।
2004 मा स्थापित यो महाविद्यालयल सफलतापूर्वक सञ्चालन हुॅंदै आइरहेको छ। यद्यपि, व्यवस्थापनको दृष्टिले भने महाविद्यालयको स्थिति अति नै दयनीय छ। दार्जीलिङका अन्य महाविद्यालय सरह घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयको योगदानलाई पनि अनदेखा गर्न नसकिने र शैक्षिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको योगदानलाई पनि कदर गरिनु पर्ने अनुरोध धेरैपल्ट गर्दा पनि कतैबाट सुनवाई नभएपछि यो कदम उठाउन बाध्य भएको बताइएको छ।
यस अभियानलाई ‘शिक्षा सडकमा अभियान’ नामकरण गरी शिक्षाको क्षेत्रमा हेलचेक्राइँ र शिक्षित युवा जमातलाई कुँजे बनाउने कार्य भइरहेको पनि डा. दाहालले बताएका छन्।
Previous Post विकास ढॉंचागत मात्र होइन, व्यवहारिक अनि सामाजिक आर्थिक आधारित हुनुपर्छ: एबी कार्की
Next Postएमसीएक्स मामिलामा भाजपाद्वारा सदर थानामा प्राथमिकी दर्ता